Soy de Mac isvikiro reboka reInternet reAB iro kubvira 2008 rave kugovana nevaverengi varo vese nhau, dzidziso, mateki uye neruzivo rwese rwazvino nezve tekinoroji mune zvese uye Mac kunyanya.
KuSoy de Mac isu tiri pachena kuti chakanyanya kukosha kugovana ruzivo rwakawanda sezvazvinogona pamusoro peizvo chaizvo zvine shungu nezvevose vanotishanyira uye vanoda kana vari kutsvaga ruzivo rwakadzama nezve zvigadzirwa kana software zvine chekuita neApple neMac. Nharaunda yevashandisi inoramba ichikura zuva nezuva uye nhasi tinogona kutaura kuti tiri pakati pevanonyanya kukurudzira midhiya paMac uye Apple mune zvese.
El yekunyora timu yeSoy de Mac Iyo inoumbwa nevanyori vanotevera:
Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chechikwata chekunyora chaSoy de Mac, zadza fomu iri.
Coordinator kuSoy de Mac kubvira 2013 uye vachinakirwa zvigadzirwa zveApple nesimba ravo rese uye nekushaya simba. Kubva 2012 pakauya iMac yekutanga muhupenyu hwangu, handisati ndambonakidzwa nemakomputa zvakanyanya kare. Pandaive mudiki ndaishandisa iyo Amstrad uye kunyangwe Comodore Amiga kutamba uye kunwa, saka ruzivo nemakomputa uye zvemagetsi chimwe chinhu chiri muropa rangu. Ruzivo rwakawanikwa nemakomputa aya pamusoro pemakore zvinoreva kuti nhasi ndinogona kugovana huchenjeri hwangu nevamwe vashandisi, uye zvinondiita kuti ndirambe ndichidzidza. Iwe uchandiwana pa Twitter se @jordi_sdmac
Yakanga isati yasvika pakati pe2000s pandakatanga kupinda muMac ecosystem ine chena MacBook yandinayo. Ini parizvino ndinoshandisa Mac Mini kubva muna 2018. Ndine makore anopfuura gumi echiitiko neiyi sisitimu inoshanda, uye ndinoda kugovana ruzivo rwandakawana nekutenda kuzvidzidzo zvangu uye nenzira yekuzvidzidzisa.
Technology fan mune zvese uye neApple zvakasikwa kunyanya. Ini ndinofunga iyo MacBook Pros ndiyo akanakisa zvishandiso paapuro. Iko kusununguka kwekushandisa kweMacOS kunokupa iwe kugona kuyedza zvinhu zvitsva pasina kupenga. Iyo Bata Bhawa inofanira kuve inosungirwa pamakomputa ese.
Yakasungirirwa pane zvakasikwa zvakagadzirwa naMabasa naWoz, kubvira Apple Watch yangu payakachengetedza hupenyu hwangu. Ini ndinonakidzwa nekushandisa iMac yangu mazuva ese, kungave kwebasa kana kunakidzwa. macOS inoita kuti zvive nyore kwauri.
Bachelor yeMishonga uye Chiremba wevana nekudana. Anoshushikana nehunyanzvi, kunyanya zvigadzirwa zveApple, ndine mufaro wekuva mupepeti we "iPhone News" uye "Ini ndinobva kuMac". Akabatwa pane akateedzana mushanduro yekutanga. Podcaster ine Actualidad iPhone uye miPodcast.
Unoda tekinoroji, kunyanya zvigadzirwa zveApple. Ini ndanga ndichidzidza ne macbook, uye parizvino Mac ndeye inoshanda system inondiperekedza zuva nezuva, zvese mukudzidzira kwangu uye nguva yekuzorora.
Kupenga nezve tekinoroji, mitambo uye kutora mifananidzo. Kufanana nevakawanda, Apple yakachinja hupenyu hwedu. Uye ini ndinotora mac yangu chero kupi. Ndinoda kuve neruzivo nezvose, uye ndinovimba zvinokubatsira kuti unakidzwe neiyi sisitimu yekushandisa zvakanyanya seni.
Nyanzvi ye microcomputer kubva zvandatanga, ndinofarira zvehunyanzvi mune zvese uye Apple nezvigadzirwa zvacho kunyanya, zvandinofarira Mac.Ndinonakidzwa nekushanda pamwe nenguva zhinji dzekutandara ne laptop yangu.
Ini ndinongofarira zveApple zvigadzirwa, semamiriyoni evamwe vanhu. Iyo Mac chikamu chehupenyu hwangu hwezuva nezuva uye ini ndinoedza kuunza kune yako.
Jesu Arjona Montalvo
Mugadziri muIOS uye IT masisitimu, parizvino akatarisana nekudzidza uye kunyora zvinyorwa zvangu mazuva ese nezveApple inoshanda sisitimu. Ini ndinotsvaga zvese zvine chekuita neMac uye ndinozvigovana munhau dzinozoita kuti iwe urambe uchiziva.
Electronic Injiniya anodisa nezve Apple nyika uye kunyanya nezveMac, yeavo vanobheja pazvinhu zvitsva uye tekinoroji senzira yekuvandudza nharaunda yedu. Akapindwa muropa nekusamborega uye kudzidza ese nguva. Saka ndinovimba kuti zvese zvandinonyora zvinobatsira kwauri.
Nguva dzose ndichida kudzidza, ndinoda zvese zvine chekuita nematekinoroji matsva uye kubatana kwavo nebazi redzidzo nedzidzo. Ndine shungu neMac, kubva kwandiri kugara ndichidzidza, uye ndichigara ndichitaurirana kuitira kuti vamwe vanhu vagone kunakidzwa neiyi huru sisitimu yekushandisa.
Kushushikana nezve tekinoroji mune zvese, uye kunyanya nezvenyika yeMac.Munguva yangu yemahara nguva, ndinozvitsaurira kuhutori hwemamwe mapurojekiti uye masevhisi ewebhu senge iPad Nyanzvi, Coronavirus nhamba o IP kero, nguva dzose neMac yangu, iyo yandinodzidza mazuva ese. Kana iwe uchida kuziva vadiki uye kunaka kweiyi inoshanda system, ini ndinovimba unofarira zvinyorwa zvangu.
Kunyora uye tekinoroji ndizvo zviviri zvandinofarira. Uye kubva 2005 ndine rombo rakanaka rekuvabatanidza vachibatana mune yakasarudzika midhiya muchikamu, ndichishandisa hazvo Macbook. Zvakanakisisa pane zvese? Ndichiri kunakidzwa sezuva rekutanga kutaura nezve chero chirongwa chavanoburitsa iyi sisitimu inoshanda.
Mhoroi apo! Ndichiri kurangarira pandakawana Mac yangu yekutanga, yekare MacBook Pro iyo kunyangwe yaive yakura kudarika PC yangu panguva iyoyo yakapa chiuru kutendeuka. Kubva musi iwoyo pakange pasisina kudzokera kumashure ... Ichokwadi kuti ini ndinopfuurira nemaPC nekuda kwezvikonzero zvebasa asi ndinofarira kushandisa Mac yangu ku "disconnect" uye kutanga kushanda pamaprojekiti angu ega.